Thu, Sep 20, 2018 | 18:31:32 NST
विदेश पठाई दिन्छु भन्दै ठगेको आरोपमा पक्राउ
काठमाडौं, मंसिर १८ - बैदेशिक रोजगारीमा पठाईदिने बहानामा रकम लिएर फरार रहेको आरोपमा ओखलढुङ्गा पोकलीका रमेश कार्कीलाई प्रहरीले पक्रेको छ । सुशिला तामाङलाई २ महिना भित्र बैदेशिक रोजगारीमा पठाईदिने भन्दै ४ लाख १२ हजार ५ सय रुपैयाँ लिएर कार्की २ बर्षदेखि फरार भएका प्रहरीको भनाई छ ।
खोप लगाए लगत्तै शिशुको मृत्यु
धनगढी, मंसिर १८ - बैतडीको रोडिदेवल गाविसमा खोप लिएको केही घण्टामै एक डेढ महिनाका शिशुको ज्यान गएको छ । रोडिदेवल गाविस वडा नं. ३ रहपाटी बस्ने प्रकाश भण्डारीका डेढ महिनाका छोरा निरज भण्डारीको बिसिजि र डिपिटी खोप लगाए लगत्तै ज्यान गएको हो ।
चरेशको कारोबारी गिरोह प्रहरी फन्दामा
धनगढी, मंसिर १८ - सुदूरपश्चिममा पहाडी जिल्लाहरुबाट लागु औषध चरेशको अवैध कारोबार गर्ने गिरोहका ७ जनालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ । प्रहरीले १३ किलो १ सय ग्राम चरेश, ८१ हजार नगद र दुई मोटरसाईकल समेत बरामद गरेको छ । प्रहरीले बैतडीको पाटन गाविस वडा नं. ५ घर भई कैलालीको उत्तरबेहडीमा बस्दै आएका ३० वर्षका भान सिह कठायत ५ किलो चरेश सहित पक्राउ गरेको हो ।
किरा परेको लिटो वितरण गर्ने तयारी
बझाङ, मंसिर १८ - जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय बझाङले किरा परेको सर्वोत्तम लिटो वितरण गर्ने तयारी गरिरहेको छ । यसअघि नै गुणस्तर नभएको भन्दै वितरण नगरी कार्यालयको स्टोरमा थन्काएर राखिएको लिटो फेरी बाड्ने तयारी भएको छ । जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयले विभागको निर्देशनमा लिटो बाँड्ने तयारी गरि रहेको भए पनि प्रमुख जिल्ला अधिकारीले किरा परेको लिटो बच्चाहरु लाई खुवाउँदा खतरा हुन सक्ने भन्दै लिटो नखुवाउन सुझाव दिनु भएको छ ।
पूर्वी नेपालका सोझा-साझालाई ठग्दै छ नेटवर्किङ्गले
सुनसरी, मंसिर १८ - प्रशासनले ध्यान नदिदाँ बिलियन भेन्चर इन्टरनेशनल बिभिआई नामको नेटवर्किङ्ग कम्पनीले ठगी गरिरहेका यसबाट पीडित भएकालेहरुले बताएका छन् । ताइवानमा मुख्य कार्यालय रहेको यो नेटवर्किङ्ग कम्पनीले यसको सदस्यता लिएमा मालामाल हुने भन्दै सुनसरी मोरङ्गका सर्वसाधारणबाट गैरकानुनी रुपमा रकम उठाइ रहेको छ ।
विद्यालय भवन निर्माणमा ढिलाई भएको भन्दै आक्रोश
विद्रोही गिरी उज्यालो । नवलपरासी, मंसिर १८ - विद्यालयको भवन निर्माण प्रक्रियामा ढिलाई गरेको भन्दै बुलिङटारका बासिन्दाहरुले आक्रोश पोखेका छन् । जिल्ला विकास समिति नवलपरासीले भारतीय दुतावासको सहयोगमा निर्माण हुने त्रिभुवन उच्च माविको भवन निर्माण प्रक्रियामा ढिलाई गरेको भन्दै स्थानीयले आक्रोश पोखेका हुन् ।
दाङ, मंसिर १८ - दाङ र सल्यानमा सोमवार दिउँसो भएका दुई छुट्टाछुट्टै दुर्घटनामा दुई जनाको ज्यान गएको छ । पूर्वबाट पश्चिमतर्फ जादै गरेको बा ८ च ९९४४ नम्बरको कारले दाङको सतबरिया गाविसको बनघुस्रीमा ठक्कर दिँदा स्थानीय ६ बर्षिया भिमी बोहराको घटनास्थलमै ज्यान गएको प्रहरीले जानकारी दिएको छ ।
बाँकेका १० गाविस मानव बेचखिनको उच्च जोखिममा
नेपालगन्ज, मंसिर १८ – बाँकेका १० गाविस मानव बेचबिखनको उच्च जोखिममा रहेको पाइएको छ । माइती नेपाल क्षेत्रीय कार्यालय नेपालगञ्जका अनुसार रझेना, कोहलपुर, सीतापुर, बनकटुवा, खासकुश्मा, चिसापानी, मनिकापुर, शम्शेरगन्ज र महादेवपुरी गाविस मानव वेचविखन र असुरक्षित बसाईसराइका दृष्टिले उच्च जोखिममा रहेका छन् ।
अफिम र गाँजा सहित एकजना पक्राउ
बारा, मंसिर १८ – बाराको पथलैयाबाट प्रहरीले विहान लागुऔषध अफिम र गाँजा सहित १ जनालाई पक्रेको छ । वीरगञ्जबाट जनकपुरका लागि छुटेको ना ३ ख ४८९८ नम्वरको बसमा चेकजाँच गर्दा जितपुर ३ बाराका रामप्रसाद साहलाई प्रहरीले अढाई सय ग्राम अफिम र ३ किलो गाँजा सहित पक्राउ गरेको हो ।
ब्यारेकभित्रै सैनिकले गरे आत्महत्या
उदयपुर, मंसिर १८ – उदयपुरको त्रियुगा नगरपालिका ७ भुल्केमा रहेको १८ नम्बर बाहिनीमा कार्यरत एक नेपाली सेनाका अमल्दारले बाहिनीभित्रै आत्महत्या गरेका छन् । भोजपुरको नाघि ९ स्थायी घर भई सुनसरीको पकलीमा अस्थायी रुपमा बस्दै आएका ३० बर्षिय रामप्रसाद घिमिरेले बिहान बाहिनी परिसरमै आत्महत्या गरेको प्रहरीले जनाएको छ ।
आगालगीबाट घर जल्यो, ५ लाखको क्षति
पोखरा, मंसिर १८ – कास्कीको धितालमा सोमबार विहान एउटा घरमा आगलागी हुँदा ५ लाख रुपैयाँको क्षति भएको छ । स्थानीय माया ढुङ्गानाको घरमा बिहान करिब साढे ८ बजेतिर बिजुलीको तार सर्ट भई आगो लागेको प्रहरीले जनाएको छ ।
श्रीमानको कुटाइबाट ज्यान गयो
सिरहा, मंसिर १८ – सिरहाको तरेगना गोविन्दपुरका मोहम्मद सहमत मियाँको कुटाइबाट श्रीमती सनितरी खातुनको ज्यान गएको छ । घरायसी विवादमा मोहम्मदले दुई दिनअघि कुटपीट गरेको र घाइते खातुनको उपचारको क्रममा आइतबार बेलुकी ज्यान गएको वडा प्रहरी कार्यालय लहानले जनाएको छ ।
नेपालकी पुष्पा बस्नेतलाई सिएनएन हिरोको उपाधि
काठमाडौ, मंसिर १८ – नेपालकी पुष्पा बस्नेतले यस वर्षको सिएनएन हिरो अफ द इयरको उपाधि जित्नुभएको छ । उपाधिसंगै उहाँले २ लाख ५० हजार अमेरिकी डलर पुरस्कार पाउनुभएको छ । अमेरिकाको लस एञ्जलसमा नेपाली समय अनुसार सोमबार विहान भएको कार्यक्रममा उहाँले अरु ९ देशका प्रतिस्पर्धीलाई पछि पार्दै उपाधि जित्नुभएको हो । उपाधि घोषणा हुँदा भावविह्वल बनेकी बस्नेतले आफ्नो योगदानको कदर गर्दै अवार्ड प्रदान गरेकोमा खुशी ब्यक्त गर्नुभयो । उहाँले सिएनएन हिरो बन्नका लागि आफूलाई सहयोग गर्नेलाई धन्यवाद समेत दिनुभएको छ...
आज अन्तराष्ट्रिय अपाङ्ग दिवस
काठमाडौ, मंसिर १८ – आज अन्तराष्ट्रिय अपाङ्ग दिवस, नेपालमा पनि बिभिन्न कार्यक्रम गरी मनाइदैछ । सरकारी तथा गैरसरकारी संघसंस्थाले अपाङ्गता भएकाहरुको अवस्था र अधिकारको विषयमा चेतनामुलक कार्यक्रम गर्दैछन् ।
सिलाई पसलमा आगलागी, १० लाखको क्षति
धादिङ, मंसिर १८ – नुवाकोट दुईपीपल ८ केउरिनीमा रहेको नमुना सिलाई तथा कपडा पसलमा सोमबार बिहान आगलागी भएको छ । आगलागीबाट झण्डै १० लाख रुपैयाँ बरावरको क्षति भएको अनुमान गरिएको छ ।
अनियमितता गर्ने सप्तरी जिविसका ८ कर्मचारी निलम्बनमा
सप्तरी, मंसिर १७ - अनियमिततामा संलग्न रहेको पाइए पछि जिल्ला विकास समिति सप्तरीका ८ जना कर्मचारीलाई निलम्वन गरीएको छ । आर्थिक अनियमितता तथा भ्रष्टाचारमा संलग्न रहेको भन्दै उनीहरुलाई उपप्रधान तथा स्थानिय विकास मन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ नेतृत्वको उच्च स्तरीय टोलिको निर्देशनमा निलम्वन गरिएको सप्तरीका स्थानीय विकास अधिकारी कृष्णप्रसाद सापकोटाले जानकारी दिनुभयो ।
१०५ बर्षको उमेरमा नागरिकता
दुर्गाप्रसाद शर्मा/उज्यालो । पर्वत, मंसिर १७ - सोह्र बर्ष उमेर पुगेपछि नेपाली नगारिकता पाउने बैधानिक प्रावधान छ । तर पर्वतको एक दुर्गम गाउँमा एक महिलाले भने उमेर पुगेको नागरिकताका लागि योग्य भएको ९१ वर्षपछि नागरिकता पाएकी छिन् । पर्वतको पाखापानी गाविस ६ की कृष्णकुमारी खत्रीले १ सय ५ वर्षको उमेरमा पहिलोपटक नागरिकता लिनुभएको हो ।
कुन कार्यालयका कति जना कर्मचारी छड्केमा ?
काठमाडौं, मंसिर १७ - नेपाल विद्युत प्राधिकरणमा १ सय ३३ जना कर्मचारी कार्यालय समयमा अनुपस्थित रहेको फेला परेको छ । राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले गरेको हाजिरी छड्केमा प्राधिकरणमा १ सय ३३ जना कर्मचारी अनुपस्थित रहेको फेला परेको हो । यस्तै गोरखापत्र संस्थानमा ६२ जना अनुपस्थित रहेको फेला परेको छ ।
आदिवासीले जलाए जनगणनाको तथ्यांक
पोखरा, मंसिर १७ - नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ जिल्ला समन्वय परिषद् कास्कीले २०६८ सालको जनगणनामा विभिन्न १२ जातजातिको जनसंख्या उल्लेख नगरेको भन्दै पोखरामा जनगणनाको तथ्यांकको प्रतिलिपी जलाएको छ । परिषद्ले सरकारले सुचिकृत गरेको ५९ आदिवासी जनजातिमध्ये सुरे, लार्के, सियार, थुदाम, ताङ्बे, मुगाल, मार्फाली थकाली, बाह्रगाउँले, तिन गाउँले, बनकरिया, फ्रि र छैरोतनको जनसंख्या उल्लेख नगरेको भन्दै जनगणनाको प्रतिलिपी जलाएको हो ।
घर फर्कने तयारीमा रहेका दर्जीको मलेसियामै निधन
भरत रिमाल/उज्यालो । मलेसिया, मंसिर १७ - रोजगारीका लागि २ वर्षअघि मलेसिया पुगेका धनुषा जनपुरधामका फिरोज दर्जी आउँदो महिना घर परिवार भेट्न नेपाल फर्कने तयारी हुनुहुन्थ्यो । तर अब दर्जी होइन उहाँको शब चाहिं कफिनमा प्याक भएर नेपाल फर्कने भएको छ ।
गोमा एयरको कार्गो विमान सामान्य दुर्घटनामा
डोल्पा, मंसिर १७ – गोमा एयरको कार्गो विमान डोल्पा विमानस्थलमा सामान्य दुर्घटनामा परेको छ । आइतबार बिहान अवतरणका क्रममा टायर पन्चर भएको गोमा एयरले जनाएको छ ।
गोली हानी श्रीमतीको हत्यागरेपछि आत्महत्याको प्रयास
धनगढी, मंसिर १७ – कैलालीको सहजपुर २ मा एकजनाले गोली हानी आफ्नै श्रीमतीको हत्या गरेका छन् । सहजपुर गाविस वडा नं २ का तिलक सारुमगरले आफ्नै श्रीमती कोपिला सारुमगरलाई शनिबार राती गोली हानी हत्या गरेका हुन् ।
मैनबत्ती पल्टिँदा आगलागी, ७ वर्षिय वालकको मृत्यु
पोखरा, मंसिर १७ – पोखराको पटनेरीमा शनिबारराती आगलागी हुँदा एकजनाको ज्यान गएको छ । अन्य ३ जना घाईते भएका छन् । पटनेरीमा रहेको देवी विकको घरमा मैनबत्तिबाट सल्केको आगो फैलिँदा ७ बर्षिय बालक सन्तोष विकको ज्यान गएको हो ।
आज अन्तर्राष्ट्रिय दासता उन्मूलन दिवस
काठमाडौं, मंसिर १७ अन्तर्राष्ट्रिय दासता उन्मूलन दिवस विभिन्न कार्यक्रम गरी मनाईंदैछ । ‘विभिन्न क्षेत्रमा हुने गरेका शोषणको अब अन्य गरौं’ भन्ने आह्वानका साथ नेपालमा पनि विभिन्न कार्यक्रम हुँदैछन् ।
गाडीबाट ओर्लँदा किचेर मृत्यु
काठमाडौं, मंसिर १७ – शनिबार राति काठमाडौंमा भएको दुर्घटनामा एक जनाको ज्यान गएको छ । बालाजुको माछापोखरीमा भएको दुर्घटनामा धादिङ छत्रेदेउरालीका २५ वर्षिय विमल भण्डारीको घटनास्थलमै ज्यान गएको प्रहरीले जनाएको छ ।
रेडियो मै चोरी
रौतहट, मंसिर १६ - रौतहटको नुनथर रेडियोमा चोरी भएको छ । रेडियोको प्रशारण बन्द भएको बेला शुक्रवार राती २ वटा कम्पयुटर, एउटा ल्यापटप, एउटा रेकर्डर, युपिएस लगायतका सामान गरी झण्डै २ लाख रुपैयाँ बराबरका चोरी भएको स्टेशन म्यानेजर फणी महतले जानकारी दिनुभयो ।
२ सय रोपनी जग्गामा लगाइएको गाँजा नष्ट
खोटाङ, मंसिर १६ – खोटाङमा प्रहरीले २ सय रोपनी जग्गामा लगाइएको गाँजा नष्ट गरेको छ । खोटाङको पश्चिमी गाविस दुर्छिमका किसानले २ सय रोपनी जग्गामा लगाएको अवैध गाँजा प्रहरीले नष्ट गरेको हो ।
अबैध सम्बन्धबाट जन्मिएको शिशु फालेको अभियोगमा पक्राउ
दमन राई/ उज्यालो । खोटाङ, मंसिर १६ – अबैध यौन सम्बन्धबाट जन्मिएको शिशुलाई जंगलमा फालेको अभियोगमा खोटाङमा दुईजना पक्राउ परेका छन् । बच्चालाई जिउँदै जंगलमा फालेको अभियोगमा सिम्पानी ८ का १७ वर्षीय राजेश खड्का र १८ वर्षीया रिता तामाङ पक्राउ परेका हुन् ।
घुस लिँदै गर्दा रंगेहात पक्राउ परेका पाँच ट्राफिक प्रहरी निलम्बित
ललितपुर, मंसिर १६ – ललितपूर सानेपामा घुस लिइरहेका बेला रंगेहात पक्राउ परेका पाँच जना ट्राफिक प्रहरी निलम्बनमा परेका छन् । सानेपामा भारतीय गाडीमा घुस लिइरहेका बेला पक्राउ परेका ट्राफिक प्रहरी हवल्दार गणेशकुमार श्रेष्ठ सहित ५ जनालाई निलम्बन गरिएको महानगरीय प्रहरी ट्राफिक महाशाखाका प्रवक्ता पवन गिरीले जानकारी दिनुभयो ।
न्याय माग्दै बलात्कृत महिला
राजेन्द्र कार्की/ उज्यालो । जाजरकोट, मंसिर १६ – देशभर महिला हिसां बिरुद्धको १६ दिने अभियान चलिरहेका बेला जाजरकोटकी एक महिला भने आफुलाई बलात्कार गर्नेलाई कारबाहीको माग गर्दै एक महिनादेखि भौतारिरहेककी छन् । एक महिनाअघि बलात्कारको शिकार बनेकी जाजरकोट पुन्मा १ की सुरिता शाहीले अझै न्याय पाउनुभएको छैन ।
मलेसियामा न्यूनतम तलब ९ सय रिङ्गेट ! पाउलान् त नेपालीले ?
भूमिराज पराजुली/ उज्यालो । मलेसिया, मंसिर १६ – गएको मे १ तारिख (बैशाख १९ गते) मलेसिया सरकारले कामदारको न्यूनतम तलब ९ सय रिङ्गेटको घोषणा गर्‍यो । घोषणामा स्वदेशी र विदेशी कामदार भनेर छुट्याइएको छैन । यो घोषणाले मलेसियामा काम गर्ने नेपालीहरु आफ्नो तलब बढ्ने आशामा खुशी भएका छन् । सरकारको यो घोषणा सन् २०१३ को जनवरी महिनासम्ममा कार्यान्वयन गरिसक्नुपर्नेछ ।
हात्ती नियन्त्रण गर्न प्राबिधिक टोली परिचालन
बारा, मंसिर १६ – ५ दिनमा जंगली हात्तीको आक्रमणबाट ४ जनाको ज्यान गएपछि बाराको सपही गाविसमा हात्ती नियन्त्रणका लागि प्राविधिक टोली परिचालन गरिएको छ । जिल्ला वन कार्यालयले चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज र पर्सा वन्यजन्तु आरक्षबाट ५ जना प्राविधिक टोली प्रभावत क्षेत्रमा खटाएको हो ।
प्रधानाध्यापकलाई हातपात गर्ने पक्राउ
दमन राई/उज्यालो खोटाङ, मंसिर १६– खोटाङमा प्रधानाध्यापकलाई हातपात गरेको अभियोगमा विद्यालय व्यवस्थापन समितिका पूर्वअध्यक्ष सहित दुई जना पक्राउ परेका छन् । खार्मी ५ को जालपा निमाबिका प्रधानाध्यपक इश्वर राईलाई ज्यान मार्ने धम्कीसहित हातपात गरेको अभियोगमा व्यवस्थापन समितिका पुर्वअध्यक्ष श्यामकुमार राई र उहाँका दाजु लालबहादुर राई पक्राउ परेका हुन् ।
नक्कली श्रम स्टिकर र छापसहित ३ जना पक्राउ
काठमाडौं, मंसिर १५ – नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले नक्कली श्रम स्टिकर र छापसहित ३ जनालाई पक्राउ गरेको छ । ब्युरोले रामेछाप प्रिति २ का बुङसाङ दोर्जे लामा, सर्लाही घुर्कौली ८ का महेश अधिकारी र सुनसरी धरान ११ का अभय पोख्रेललाई काठमाडौंबाट पक्राउ गरेको हो ।
अत्याधिक रक्सी सेवनले ज्यान गयो
दुर्गाप्रसाद शर्मा/ उज्यालो । पर्वत, मंसिर १५ – अत्याधिक रक्सी सेवनबाट पर्वतको बनौ गाविसमा एक जनाको ज्यान गएको छ । जिल्लाको पाङ गाविस ८ सिंदालीका ४९ वर्षिय डम्बरबहादुर बिकको अत्याधिक रक्सी सेवनबाट ज्यान गएको हो ।
दूध बोकेको गाडी पल्टिँदा चालकको ज्यान गयो
इलाम, मंसिर १५ – इलामको कोल्बुङ्गमा शुक्रबार बिहान गाडी पल्टिँदा एक जनाको ज्यान गएको छ । एक जना गम्भीर घाईते भएका छन् । इलामबाट विराटनगरका लागि दुध बोकेर छुटेको मे १ ख ३१५५ नम्बरको ट्याङ्कर पल्टिँदा चालक मोरङ टंकिसिनुवारीका उद्धव कटुवालको ज्यान गएको प्रहरीले जनाएको छ ।
ट्राफिक सन्देशको नाममा आफ्नै संस्थाको प्रचार
काठमाडौ, मंसिर १५ – ट्राफिक नियमबारे जनचेतनामूलक होडिङबोर्डका नाममा आफ्ना सामाग्रीको बढी प्रचार गर्न थालेपछि प्रहरीले त्यस्ता होडिङबोर्ड हटाउन थालको छ । ट्राफिक प्रहरी कार्यालयको भवनमाथि, कार्यालय कम्पाउण्ड र ट्राफिक उभिने चोकहरुमा राखिएका ३९ वटा प्रचारात्मक होडिङबोर्ड हटाइसकेको प्रहरीले जनाएको छ ।
झुम्का कारागारबाट भागेका अर्का कैदीपनि पक्राउ
सुनसरी, मंसिर १५ – सुनसरीको झुम्कामा रहेको क्षेत्रीय कारगारबाट फरार रमेश यादब पक्राउ परेका छन् । ज्यान मारेको अभियोगमा जेल परेका सुनसरी नरसिङका यादबलाई भारतीय प्रहरीले भारतको सुपौल किसानपुरबाट पक्राउ गरेको हो ।
हात्तीले कुल्चिँदा २ जनाको ज्यान गयो
बारा, मंसिर १५ – बाराको सपही गाविस ७ मा बिहीबार राती जंगली हात्तीको आक्रमणबाट दुई जनाको ज्यान गएको छ । सपही ७ का ३० वर्षिय सुदर्शन चौधरी र ७० वर्षिय सुरज चौधरीको ज्यान गएको हो ।
यस्तो पो सहमति!
राधाकृष्ण डुम्रे/ उज्यालो । स्याङ्जा, मंसिर १४ – स्याङ्जाको एक विद्यालयमा ४० वर्षदेखि एउटै व्यक्ति विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष छन् । केवरेभञ्याङ गाविस वडा नम्बर १ मा रहेको बालसिद्ध उच्च माध्यमिक विद्यालयले व्यवस्थापन समितिको अध्यक्षमा विगत चालिस वर्ष देखि एउटै व्यक्तिलाई सर्वसम्मत अध्यक्ष छान्दै आएको हो ।